China Ultrasonic Copper Aluminium Fiovam-po 20Khz 3000w Welding ho an'ny motera sy mpanamboatra Transformer ary orinasa | Qianrong
Ultrasonic Copper Aluminium Fiovam-po 20Khz 3000w Welding ho an'ny Motor sy Transformer
fahefana 2000W 3000W 4000W
Faritra welding 0.5-16mm2 0.5-20mm2 1-30mm2
Fanerena ny rivotra 0.05-0.9MPa 0.05-0.9MPa 0.05-0.9MPa
hatetika 20KHZ 20KHZ 20KHZ
Zintin'aratra 220V 220V 220V
Ny lanjan'ny tandroka 18KG 22KG 28KG
Dimension an'ny tandroka 530 * 210 * 230mm 550 * 220 * 240mm 550 * 250 * 240mm
Generator Size 540 * 380 * 150mm 540 * 380 * 150mm 540 * 380 * 150mm
Ny fantsom-piarovan-tariby ultrasonika dia mampiasa onjampevitra mihetsiketsika avo lenta mba hampita azy eo ambonin'ny sehatry ny fantsom-pitaovan-tariby roa hampidinina. Eo ambanin'ny tsindry, ny lafin-javatra fonosin'ny kofehy roa dia soloina mba hanambatra ny sosona molekiola. Ny tombony dia haingana sy mitsitsy angovo. Herin'ny fusion mahery, fitondra mandeha amin'ny herinaratra tsara, tsy misy spark, manakaiky ny fanodinana mangatsiaka; ny fatiantoka dia ny faritra vy metaly tsy tokony ho matevina loatra (matetika latsaky ny na mitovy amin'ny 5mm), tsy tokony ho lehibe loatra ny tonon-tsolika, ary mila tsindriana.
Ny milina fantsom-piarovan-tariby ultrasonika dia tsy mitaky fikorontanana sy fanafanana ivelany, tsy ovaina amin'ny hafanana, tsy misy adin-tsaina sisa tavela, ary mitaky fitsaboana tsy vita mialoha mialoha amin'ny laoniny amin'ny fantson-drano. Tsy metaly mitovy ihany, fa eo anelanelan'ny metaly samihafa ihany koa dia azo atsofoka. Ny takelaka na ny filamenta dia azo fefy amin'ny takelaka. Ny fantsom-pandrefesana ultrasound an'ny mpampita elektrika tsara dia kely angovo noho ny welding ankehitriny ary matetika ampiasaina amin'ny fametahana ny fitarihana ho an'ny transistors na boriborintany mifangaro. Rehefa ampiasaina amin'ny famehezana zava-mahadomelina sy akora mipoaka dia afaka misoroka ny fametahana fanafody maloto amin'ny ankapobeny noho ny zavatra simba ary tsy hipoaka noho ny hafanana. Ny fampiasana ny onjam-peo ultrasonika dia manamboatra tariby vy. Izy io dia misy boaty herinaratra, transducer, host pneumatic ary lohan'ny fitaovana. Ho fanampin'izay, tafiditra ao koa ireo singa fanaraha-maso toy ny hubs, fitaovana mamakivaky ary ny microprocessors. Ny boaty herinaratra dia mamadika ny malefaka ivelany (~ 220V, 50 na 60Hz) mahazatra ho lasa 20000Hz (20KHz), herinaratra mihoatra ny 1 volt, ary fehezin'ny boaty herinaratra mba hamoahana sy hiasa amin'ny transducer. Ny transducer dia singa elektrika mahomby izay manova ny angovo herinaratra ho lasa angovo mekanika. Raha ampitahaina amin'ny motera mahazatra dia misy fahasamihafana roa lehibe eo amin'ny transducers: voalohany, ny transducer dia mamadika ny herinaratra ho lasa vibration linear fa tsy fihodinana; faharoa, miasa tena mandaitra izy ary afaka mamadika 95% ny angovo herinaratra. Aorian'ny fiovan'ny transducer, ny angovo mekanika dia ampiharina amin'ny lohan'ny welding. Ny tandroka ultrasonic dia vita amin'ny firaka titanium ary milina amin'ny endrika manokana araky ny fitsipiky ny akustika mba hiantohana ny famindrana angovo be indrindra.c
Rehefa mamoaka fanairana mavesatra ny mpamorona dia tokony hojerena toy izao
1. Fitsapana tsy misy enta-mavesatra, raha ara-dalàna ny fandehan'ny asa, dia mety mifandraika amin'ilay zavatra tsy tokony hokasihina ny lohan'ny fantsom-panafody na diso ny fanitsiana ny elanelam-potoana eo amin'ny lohan'ny welding sy ny sezika.
2. Rehefa tsy ara-dalàna ny fitsapana tsy misy enta-mavesatra, diniho aloha sao misy triatra ao amin'ny lohan'ny welding, na mafy ny fametrahana azy, avy eo esory ny loham-pametahana ary tanteraho ny fitsapana tsy misy enta-mavesatra mba hanafoanana raha misy olana amin'ny ny transducer + tandroka, ary esory tsikelikely. . Aorian'ny fanesorana ny mety tsy fahombiazan'ny tandroka transducer +, soloy ny tandroka vaovao hamaritana.
3. Indraindray misy toe-javatra izay mahazatra ny fitsapana tsy misy enta-mavesatra, saingy tsy afaka mandeha ara-dalàna. Mety ho ny fiovan'ny angovo anatiny toy ny fihenan'ny lohan-doha, ka nahatonga ny tsy fifindran'ny angovo feo. Ity misy fomba fitsarana tsotra: fomba fikasihana tanana. Ny loha famaohana miasa na ny lohan'ny tandroka dia tena mitovy amin'ny miasa, ary mahatsiaro malama ny volony. Rehefa tsy milamina ny angovo azo avy amin'ny feo dia mahatsiaro ho toy ny bubble na burrs ny tanana. Ny fomba fanilihana dia ampiasaina mba hanafoanana ireo faritra misy olana. Ny toe-javatra mitovy amin'izany dia mety hitranga rehefa tsy mahazatra ny mpamorona, satria mazàna ny endrika fampidiran-driaka transducer dia tokony ho onjan'ny sine malama, izay mety hitranga ihany koa rehefa misy fika na endrika onja tsy mety amin'ny onja sine. Amin'izao fotoana izao, singa iray hafa amin'ny angovo akora akorika hafa azo soloina amin'ny fanavakavahana.
Previous: 3000 Watt Roll Ultrasonic Metal Welding ho an'ny Flat Solar Cells Aluminium Copper Pipe Panel
Manaraka: 4200w Hery mahery 15Khz Ultrasonic Plastika welding miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso ny faharetany
30Khz 700w Ultrasonic Vibratior ho an'ny Ultrasonic ...
Manan-tsaina 15Khz Ultrasonic Generator Digital ...
3000W Copper ultrasonic 20Khz avo matetika na ...
High Stabiliting 70Khz All Digital Ultrasonic V ...
Hery lehibe 15Khz 2600w Ultrasonic Welding Trans ...